७२ वर्ष पछि बुध ग्रहले राशि परिवर्तन गर्दैछ, यी ५ राशिलाई आकस्मिक धनलाभ हुनेछ !! – AstroSimara.Com
७२ वर्ष पछि बुध ग्रहले राशि परिवर्तन गर्दैछ, यी ५ राशिलाई आकस्मिक धनलाभ हुनेछ !!
By Astro Sudeep Dhakal	 On Apr 30, 2018
७२ वर्ष पछि बुध ग्रहले राशि परिवर्तन गर्दैछ, यी ५ राशिलाई आकस्मिक धनलाभ हुनेछ!!
आज हामी तपाईलाई बताउन गईरहेका छौं कि ७२ वर्ष पछि फेरि एक पटक बुध ग्रह कन्या राशिमा प्रवेश गर्न गईरहेको छ । जसको कारण यस अप्रिल महिनाको अन्त्य तिर केही राशिहरुमा खास प्रभाव पर्नेछ । यस बदलावको कारण सिंह, कन्या, तुला, कुम्भ र मीन राशिमा शुभ योग बन्नेछ । यी राशिका मानिसहरुको धन लाभ हुने प्रबल सम्भावना रहेको छ । यी मानिसहरुको जीवनमा अचानक केही राम्रो हुन् सक्छ ।
मेहनत र धैर्यको पूरा फल मिल्नेछ । यस हप्ता तपाईको व्यवसाय र कार्य क्षेत्रमा कुनै ठुलो सम्झौता हुने योग बनेको छ । लामो समय देखि सक्रिय रहनुभएको कार्यक्षेत्रमा तपाईको ठुलो इच्छा पूरा हुन् सक्छ । कुल मिलाएर यो बुझ्नुहोस् कि यस पटक ग्रह तपाईको अनुकूल रहनेछ । हतारमा कुनै पनि फैसला लिनबाट बच्नुहोला । तपाईको मन शान्त रहनेछ र सुखद माहोल बनिरहन्छ । साथीसंगी र प्रशंसकबाट तारिफ मिल्नेछ । साथीहरुसँगको समय राम्ररी बित्नेछ । आफ्नो स्वास्थ्यमा विशेष ध्यान दिनुहोला ।
साथीहरुसँग मिलेर नयाँ योजनाहरु बनाउने अवसर मिल्नेछ जुन भविष्यमा तपाईको लागि लाभदायक साबित हुनेछ। रोकिएका कामहरु पूरा हुनेछ र धन धन लाभ हुनेछ । अचल सम्पत्ति खरीद गर्नको लागि राम्रो समय रहेको छ । घर परिवार र नोकरीमा केही समस्याहरुले तपाईले चिन्तित बनाउन सक्छ । यस्तोमा धैर्य राखी काम गर्नुहोला र आफ्नो वाणीमा नियन्त्रण गर्नुहोला ।
प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा सुधार हुनेछ । साथीहरुसँग राम्रो एवं यादगार समय बित्नेछ । प्रेम जीवनको लागि यो दिन निकै राम्रो साबित हुनेछ । परिवार, समाज या कार्य क्षेत्रमा तपाईको माग बढ्न सक्छ । तपाईको मनको आत्मविश्वास बढ्नेछ । साझेदारीका कामहरुमा फाइदा हुन् सक्छ ।
भविष्यको बारेमा चिन्ता गर्नु आवश्यकता हुँदैन । तपाईको बाटोमा केही चुनौतीहरु आउन सक्छ जसको तपाईले डटेर सामना गर्नु पर्छ । बितेका कुराहरुलाई भुलेर पनि नसम्झिने कोसिस गर्नुहोला । प्रेम जीवनमा प्रेमी/प्रेमिकाको केही गलत कुराले सम्बन्धमा चिसोपन आउन सक्छ । यस्तोमा तपाई सावधान रहनु आवश्यक छ । कोही नजिकका व्यक्तिबाट सहयोग मिलन सक्छ । नोकरीमा लाभ हुन् सक्ने सम्भावना छ । कुनै काम हतारमा नगर्नुहोला र केही सम्झौता गर्न तयार रहनुहोला ।
ज्योतिषिय दृष्‍टिकोण बाट पञ्चक योग
आफ्नो जन्म कुण्डलीबाट यसरी थाह पाउनुहोस्, दुर्घटना हुन सक्ने समय र यसबाट बच्ने उपाय .